Manga Marine: waa maxay, sida ay u sameysantahay iyo saameynteeda | Saadaasha Shabakadda
Markaan ka hadlayno duufaannada, nooc ka mid ah ifafaale-hawleedka saadaasha hawada ee aadka u weyn oo waxyeello weyn u geysta ayaa had iyo jeer maskaxda ku soo dhaca. Mid ka mid ah noocyadeeda ayaa ah shaadhka badda. Waxaa sidoo kale loo yaqaan magaca biyo-baxa. Waa dhacdo saadaasha hawada ah oo muuqaalkeedu muuqdo una eg daruuro tiro badan oo u eg qaab madadaalo isla markaana si dhakhso leh u wareegaya. Waxay u egtahay duufaan caadi ah laakiin waxay ka dhacdaa dusha sare ee badda.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa waxa ay tahay gacanka badda, sida loo soo saaro iyo saameynta ay leedahay.
1 Waa maxay gacanka badda
2 Sidee gacmo-badeed loo sameeyaa
Waa maxay gacanka badda
Markii xasilooni-darro weyn oo jawiga ah ay dhacdo oo duufaanku ku dhacdo heerka dusha sare ee badda, waxaan haynaa waxa loo yaqaan maraakiibta badda. Waana in ay tahay ifafaale hawleed loo aqoonsan karo inuu yahay daruuro tiro badan oo leh qaab madadaalo ah oo si dhakhso leh u wareegaya. Dhacdadan ayaa ka soo degaysa daruur cumulus ah oo saldhig u ah dusha sare ee badda oo waxay ku keenaysaa kor u kaca korkeeda. Sababtaas awgeed, waxaa loogu yeeraa gacanka badda ama biyo-mareenka.
Qeexitaan ahaan waxaan uga hadlaynaa duufaan dhacdadaas saadaasha hawada ee dhulka ka dhacda oo dhalisa saameyn ba'an meesha ay dhaafto. Xaaladdan oo kale, marka laga gudbo dusha sare ee badda ayaa magaca loo beddelaa manga badda. Gacanta badda ayaa sidoo kale noqon karta duufaan caadi ah haddii ay ku dhammaato garaacista dhulka. Caadi ahaan markay tani dhacdo duufaanku waxay lumiyaan xoog badan waxayna ku dhammaataa in la waayo. Haddii aan falanqeyno gacanka badda ee ku saleysan cawaaqibka xun ee ay ku yeelan karto alaabada ama dadka, waa inaan ogaanno in xaaladdiisu aad uga yar tahay.
Si ka duwan duufaannada caadiga ah, gacanka badda wuxuu ku dhacaa badda. Tani waxay ka dhigeysaa halista ka imaan karta waxyeelada mid aad u hooseysa. Waxay saameyn ku yeelan kartaa maraakiibta qaar ee ku shiraacaya badda ama maraakiibta kalluumeysiga. Isbaanishka waxaan badanaa ka helnaa noocaan Dhacdooyinka saadaasha hawada ee ba'an ee aagagga Catalonia, bulshada Valencian, Jasiiradaha Balearic, Canaries iyo meelaha bari ee Badda Cantabrian. In kasta oo rabshadaha ifafaalahan aysan aad u sarreeyn, haddana waa ku filan tahay inay khatar weyn u noqoto kalluumeysiga iyo maraakiibta madadaalada.
Sidee gacmo-badeed loo sameeyaa
Waxaa jira daraasado badan oo baaray sida gacanka badda uu u soo baxo. Gabagabada daraasaduhu waxay daaha ka rogeen in dhacdooyinkaan saadaasha hawada laga soo saaray shan waji oo kala duwan. Waxaan falanqeyneynaa mid kasta oo ka mid ah wejiyada iyo asalka gacanka badda:
Wajiga 1: bar madow. Inta lagu jiro wejigan nooc ka mid ah qaababka disk-ka ee mugdiga ah oo ku dhowaad madow dusha sare ee biyaha. Xaqiiqda ah in wasakhdaasi ay jiri karto ayaa tilmaamaysa inay jiraan hawo hawo ah isla dusha sare. Inta lagu jiro wejigan, daruur yar oo qaab-faneel u eg ayaa laga yaabaa ama laga yaabaa inaysan jirin.
Wejiga 2: wareegga. Inta lagu jiro wejigan, kooxo muquuno ah ayaa ka sameysmaya hareeraha madow ee kor lagu soo sheegay. Kooxahan ayaa midba midka kale ku beddelanaya midabada fudud iyo kuwa madow.
Wajiga 3: giraan xumbo. Meesha mugdiga ah ee bilowga ah nooc dabayl xumbo ah ayaa bilaabi doonta inay ka samaysmaan biyaha ay dabayshu qaaddo. Isla mar ahaantaana ay taasi dhacdo ama horumarinta tooska ah ee daruurta masraxa ee loo yaqaan magaca tuba ayaa bilaabmaysa.
Wajiga 4: qaangaadhnimada. Giraanta ka samaysan xumbada iyo tubbada waxay gaarayaan dhererka iyo dhererka ugu sarreeya oo leh dhexroor ballaadhan. Waa halkan halka aan ku aragno ifafaalaha saadaasha hawada ee bilicdeeda ugu sarraysa.
Wejiga 5: baahinta. Marxaladani badanaa waxay u dhacdaa marar badan si kedis ah. Tan waxaa ugu wacan xaqiiqda ah in mid ama in ka badan oo ka mid ah xaaladaha ka dhigaya in gacanka badda uu si firfircoon u joogsado. Marar badan ayay dhacdaa in roobka ku dhow dhacdadan saadaasha hawadu waxyeello u yeelanayso gacanka badda oo sababa qulqulka qulqulka qulqulka inuu billaabo faafitaanka ifafaalaha. Nooca kale ee faafitaanka ayaa ah in gacanka badda uu soo galo dhulka oo ay ugu wacantahay awooda isqabqabsiga iyo isbadalka cufnaanta oo ku dambeysa daciifnimo ilaa ay ka baaba'do.
Waxaan dhihi karnaa ma jiro gacmo badeed si sax ah ula mid ah kan kale. Waa run in loo kala saari karo iyadoo loo eegayo waxqabadka daran ama ka daran mid kasta. Sidan oo kale, waxaa loo kala saaraa sida gacmo-badeed gacan-biyood leh Mid kasta oo ka mid ah labada gacmood ee badda ayaa leh astaamaha ugu muhiimsan. Waxaan falanqeyneynaa mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Gacanta badda ee loo yaqaan 'tornadic badda' waa ifafaalaha taas oo qaab dhismeedka loo maleynayo inuu la mid yahay kan duufaankii caadiga ahaa. Waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin ayaa ah in dhacdadu ay ka dhacdo badda dhexdeeda cagaaran dusha sare ee dhulka. Waxaa jira daraasado qaarkood oo la isku dayay in lagu beddelo erayga 'tornadic' oo lala xiriiriyo duufaanka, maadaama aysan si buuxda u caddayn in qaabka sameynta dhacdadan saadaasha hawada ay u baahan tahay jiritaanka wareegga awoodda sare, sida ku dhacda xaaladda duufaanno caadi ah.
Dhanka kale, waxaan haysannaa gacmo-gacmeedyo aan kala-go 'lahayn. Noocyada gacmaha badda ayaa ah kuwa ugu badan ee ka dhaca xeebaha Jasiiradda Iberia. Qaab-dhismeedkeeda qaab-dhismeedku wuxuu la xiriiraa isku-darka xiiridda dabaysha jiifka ah ee ka dhacda heerka badda.. Xiiriddan jiifka ahi waxay ku qasan tahay heerkulka sare ee dusha sare ee badda ee keena xaalado kuwaas oo u roon jiritaanka gacanka badda. Xeebaheena waxaa kujira qadar aad u badan oo shucaaca qoraxda ah oo sababa in dusha sare ee bada ay si dhaqso ah u kululaato waqtiga. La qabsashada badda waxay u dhacdaa si tartiib tartiib ah shucaacdan qorraxda weyn. Sababtaas awgeed, gacanka badda ayaa si isdaba joog ah uga dhaca xeebaheenna.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto ifafaalaha saadaasha hawada ee gacanka badda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Gacanta badda